फेसबुक बाट पैसा कमाउने अर्को काईदाको आईडिया ! एकाउन्ट बेचेर पनि लाखौं कमाउन सकिने ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/फेसबुक बाट पैसा कमाउने अर्को काईदाको आईडिया ! एकाउन्ट बेचेर पनि लाखौं कमाउन सकिने !
फेसबुक बाट पैसा कमाउने अर्को काईदाको आईडिया ! एकाउन्ट बेचेर पनि लाखौं कमाउन सकिने !
काठमाडौं – १६ बर्षअघि स्थापना भएको फेसबुकले वर्षेनी अबौँ रुपैयाँ नाफा बढाउँदै लगेको छ ।कम्तिमा दुई करोड प्रयोगकर्ता दैनिक एकै समयमा सक्रिय अवस्थामा रहँदा फेसबुकले आफ्नो मुनाफालाई ह्वात्तै बढाउन सफल भएको छ ।फेसबुकले मूलतः दुई तरिकाले कमाई गरिरहेको खुलेको छ ।
फेसबुकमा विज्ञापन र कन्ट्रयाक्ट प्रमोशनको माध्यमबाट एवंम आफ्ना प्रयोगकर्ताको डाटाको माध्यमबाट फेसबुकले आम्दानी गर्दै आएको छ । डाटाको हिसाबले एक अमेरिकी प्रयोगकर्ताको फेसबुक प्रोफाइलको मुल्य २३ हजार नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ ।
वर्ष २०१८ र २०१९ मा फेसबुक डाटा प्राइभेसीहरुको निकै विवादहरुबाट घेरिएको थियो । तर पनि फेसबुकले सन् २०१९ को अन्तिम त्रैमाशिकमा ६.८८ बिलियन डलर नाफा कमाएको छ ।
यसबाट कम्पनीको कुल मुनाफा ३० प्रतिशतले बढेर १६.६४ बिलियन डलर पुगेको छ । यस समयमा दैनिक फेसबुक चलाउने र मासिक रुपमा फेसबुक चलाउने दुबैमा करिब ९ प्रतिशतले बढोत्तरी भएको छ ।
फेसबुकजस्ता फ्रि वेबसाइटहरुले प्रयोगकर्तालाई फ्रिमा प्रयोग गर्न दिएर डाटालाई संकलन गर्दछन र त्यसैको आधारमा विज्ञापनहरु प्रसारण गरेर पैसा कमाउँने गरेको खुलेको हो ।यस आधारमा प्रयोगकर्ताको फेसबुक एकाउन्टको मूल्य समेत निकालिएको छ ।
विज्ञहरुले उदाहरण दिदै यसबारे अझ प्रष्ट पारेका छन ।यदी कसैको फेसबुक डाटाको पुरा फाइल ९४० एमबीको छ । त्यसमा गएको तीन वर्षदेखि प्रयोगकर्ताले फेसबुक चलाउँदै आएको छ भने यस फाइलमा प्रयोगकर्ताको पूरा जानकारी रहेको हुन्छ ।
जस्तो प्रयोगकर्ताले हालसम्म फेसकबुकमा के शेयर गर्‍यो, त्यसमा पर्सनल वा अन्य पोस्टहरु, फोटोहरु, साथीहरुसँग गरेको च्याटहरु रहेका हुन्छन् ।
यसबाहेक ती इभेन्टहरु पनि रहेका हुन्छन जसमा प्रयोगकर्ताको उपस्थिति रहेको हुन्छ । जस्तो कहिले कलेज ज्वाईन गर्नुभयो, कति वर्ष समयसम्म रिलेशनसिपमा रहको, तपाईँले कहिले कुन लिङ्क वा विज्ञापनमा क्लिक गरेको आदी ।
यी सबै जानकारी फेसबुकसँग रहेको हुन्छ जसलाई फेसबुकले बिश्लेषण गरेर प्रयोगकर्ताको बारेमा केहि अनुमान पनि बनाएर राख्ने गर्दछ ।
यावत आधारमा फेसबुकले विज्ञापनदातालाई ती डाटालाई बेच्दछ । यस्तो प्रोफाइलमा विश्वका अन्य फेसबुक प्रोफाइलको तुलनामा अमेरिकी फेसबुक प्रोफाइल पाँच गुणा महङ्गो रहेको पाइएको छ ।
युजरका प्रोफाइलहरुको एक वर्ष पहिलेको रेटमा हिसाब गर्दा एक अमेरिकी नागरिक बराबर औसत २ सय डलर अर्थात नेपाली करिब २३ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।
त्यस्तै विश्वका अन्य युजरहरुको डाटा करिव ४ हजार ५०० रुपैयाँ हुन आउँदछ । यस आधारमा पाली फेसबुक प्रयोगकर्ताको एकाउन्टको मुल्य औषतमा करिव ४ हजार ५ सय रुपैयाँको रहेको मान्न सकिन्छ । नेपालमा करिब ९१ लाख यूजर फेसबुकमा रहेको अनुमान छ।
पहिरो पिडितलाई सहयोग गर्न कालिकोट पुगे नायक पल शाह
रसियामा संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ३ हजार ५ सय ४१ पुगेको छ।
विबाहित पुरुषले आफ्नै साथीकी पत्नि भगाएर काठमाडौँ टाप कसे
पर्सामा थप ६४ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि